Iwo makuru zvigadzirwa anosanganisira alumina kukuya mabhora, yakachena kuchena alumina inert filler mabhora, kupfeka-nemishonga zvedongo liners, linings, alumina kupfeka-nemishonga zvedongo machubhu, uchi hwesimbi keramiki uye akasiyana akakosha ekupfeka-asingagumi zvikamu.
Furo Ceramic Firita Plate
Yakakwira-yakachena inert yekuzadza bhora
Kupfeka-kuramba mosaic mataera
mvura aruminiyamu mugove bhegi combo bhegi gla ...
Alumina bhora yekutsvaira muchina kupisa exchange ba ...
Anovimbwa nyanzvi alumina zvigadzirwa indasitiri
Qingdao Almelt Ceramic Co., Ltd ibazi re HK Almelt Co., Ltd, iri muQingdao budiriro Zone, Shandong Province. Iri bhizimusi rakazara rine alumina mabhora, mabhora ekuzadza, anopfeka-asingagadziri zvidhinha, zirconium-aluminium macomputer emakemikari uye zvimwe zvigadzirwa sechinhu chinotungamira, kubatanidza chigadzirwa dhizaini, R&D uye kutengesa.
Almelt inoshanda mualumumina ceramics zvigadzirwa indasitiri uye ine hupfumi hwekunze kunze kwenyika kuGerman, Australia, United States, India, Brazil, South Africa, Southeast Asia nedzimwe nzvimbo.
Zvirinani Hunhu Zvirinani Sevhisi
Zvita-07-2020 Fralco izere-otomatiki hupfu hwekupfira kunatsa rori yakaiswa mukushanda muNeimenggu
Mbudzi-11-2020 Alumina bhora desiccant kunyorera & Defluorination yeakagadziriswa alumina mabhora
Mbudzi-11-2020 Arumina bhora rinonyanya kushandiswa kupi?
Mbudzi-11-2020 Ndezvipi zvinhu zvinokanganisa alumina mabhora?
Qingdao Almelt Ceramic Co., Ltd ibazi re HK Almelt Co., Ltd, iri muQingdao budiriro Zone, Shandong Province. Iri bhizimusi rakazara rine alumina mabhora, mabhora ekuzadza, anopfeka-asingagadziri zvidhinha, zirconium-aluminium macomputer emakemikari uye zvimwe zvigadzirwa sechinhu chinotungamira, kubatanidza chigadzirwa dhizaini, R&D uye kutengesa. Iwo makuru zvigadzirwa anosanganisira alumina kukuya mabhora, yakachena kuchena alumina inert filler mabhora, kupfeka nemishonga zvedongo liners, linings, alumina kupfeka-nemishonga zvedongo machubhu, uchi hwesimbi keramiki uye dzakasiyana dzakasarudzika kusakara-kusagadzikana zvikamu.